Xog:Qorshe halis ku ah Imaaraadka iyo Gaas&Madoobe oo dowlada Soomaaliya ka fushaneyso Xaaf iyo Waare | allsaaxo online
Xog:Qorshe halis ku ah Imaaraadka iyo Gaas&Madoobe oo dowlada Soomaaliya ka fushaneyso Xaaf iyo Waare
Ayadoo maalmaha soo socda lagu waday in madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka soomaaliya shir oga furmi lahaa magaalada Baydhabo ee xarunta KMG maamulka koofur galbeed ayaa lasheegayaa in haatan dowlada qorshe u degtay.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa isbaheysi la sameyneysa Maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, si ay u yareyso saameynta iyo dhaq dhaqaaqa maamulada kale sida Puntland iyo Jubbaland, oo xilligan xurguf siyaasadeed kala dhaxeyso, waxaana ay qorsheyneysa in ugu horeyn kala dhantaasho aqbaliyada maamul goboleedyada oo dhowaan shir ku leh Magaalada Baydhabo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dowladdu ay wado dadaalo ay ku baajineyso shirkaas ama inay ku qanciso in Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle oo xilligan ku sugan magaalada Muqdisho in aanay shirkaas ka qeyb galin.
Labadaan madaxweyne goboleed ayaa lasheegayaa in kulamo la qaadanayaan madaxda dalka si shirkaas oga baaqdaan inkastoo madaxweynayaasha Puntland,Jubbaland iyo koofur galbeed siyaasad ahaan isku dhow yihiin xiligaan.
Lama oga sida oo xaalka noqon doono inkastoo dowlada soomaaliya ay wado qorshayaal ku kala jabineyso hogaamiyaasha maamul goboleedyada kuwaasi oo dhaqaalo xoogan xiligaan ka helaayo dowlada Imaaraadka carabta oo khilaaf kala dhaxeeyo dowlada Farmaajo.